Dhalinyarada Muqdisho ku Jahwareersan Qaatina ka taagan Xulushada Gabdhaha kunool Muqdisho(Waa Maxay Sababta) - iftineducation.com
iftineducation.com – Magaalada Muqdisho ayaa xiligan u Muuqata mid ee dib usoo laabaneyso bilicdii iyo nabadii waayo iyadoona ay dib ugu soo laabteen inta badan dadkii dagnaa ee ka barakacay xiligii Dagaalada darnaa ee Magaalada ka socdeen.
Magaalada markii aad dhax marto waxaad arkaysa dhalinyaro qurux badan oo isugu jira Wiilal iyo Gabdho kuwaa oo inta badan ku mashquulsan waxbarasho iyo Shaqooyin badan iyadoona Dhalinyaradu si aan cabsi laheyn ay magaalada ugu dhax mushaaxayaan.
Gabdhaha Magaalada Muqdishoku dhaqan ayaa inta badan waxa ay qaateen Indho Shareer ama Niqaab markii aad aragto 10-Gabdhood oo wada socda waxaa laasim ah in 7-Kamid ah Gabdhahaasi ay Wataan Indha Shareerka iyo Ookiyaalo aad moodo in loo wada qoray Gabdhahaasi balse badi u xirteen qaab labis ah ay ugu tala galeen in uu soo sarao Indha Shareerka ay wataan.
Inta badan Gabdha ayaa Indha Shareerka waxa ay xirtaan Xiliga ay Magalada soo aadayaan ama Iskuulada iyo Jaamacadaha u socdaan iyadoona inta badan gabdhuhu Indha Shareeka Qaarkood u xirtaan qaab xarako ah iyo yaan lagugu mashquulin inta aad jidka socoto .
Jaamacaha Qaarkood waxaa ku badan Gabdhaha gaar ahaan kuwa Caafimaadka iyo waxyaabaha la halmaala lagu barto waxaana u wada xiran Gabdhaha dhigta %80 kamid ah Indha Shareer isku wada eg oo nuuca Fashionka ah iyo Ookiyaal isna xarako u badan.
Hadaba Dhalinyaro badan oo Muqdisho kunool iyo kuwa ka maqnaa Sanadihii danbe oo dib usoo laabtay ayaa aad ugu jahwareeray Gabdha oo badi wada xirtay Indha Shareerka iyaga oo garan waayay meel ay kala jaan qaadaan Gabdhaha ama kala bilaabaan maadama ay gabarkaastaahi ay soo xiratay Indha Shareer wajigeedana uusan muuqan mana la kala garanayo in la qabo ,in garoob tahay ,in gabar yar tahay iyo in ay tahay Qof weyn.
Qaar kamid ah Dhalinyarada ayaa isticmaala qaab ku nasiibso ah iyagoona gabdhaha marka ay indha u Xiranyihiin ku qiimeeya Labiska ay gabdhu wadato iyo sidoo kale Gacmaha iyo indhaha gacmaha oo iyana laga eego cadaanta iyo in ay qof Da’ tahay hadii ay intasai dhalintu la dhacaan ayaa bilaaba in ay Weerar ku qaadaan ayna hadal ku bilaabaan haku helaan ama haku waayeenee.
Qaar baa ku faa’iida Nasiibkaga tijaabi halka qaar kalana ay ku fashilmaan kadib markii ay noqdaan Hablihii ay barteen kuwa noqon waaya sidii ay rabeen halka qaarkoodna la kulmaan islaamo waa weyn oo marka Indhuhu u xiran yahay aad u qurux badan oo ah hablaha iscadeeyay oo marka indhuhu u xiran yahay la moodo inano aad u yar oo 18-Sano jiro ah balse marsaday daawooyinka la isku qurxiyo markii toos la isku arkana halkaasi fashil ka yimaado.
Isku soo duuboo Dhalinyaro badan ayaa ku dhiban qaati bilaahina ka taagan sida ay u xulan lahaayeen gabar qurux badan oo indhahooda ay qabato gaar ahaan Dhalinyarada Qurbaha ka yimaada ee Dalka Dib ugu soo laabta si ay u guursadaan Gabdho Qurux Badan oo Muqdisho jooga.
Kadir Anlayisli ” Dilaagii Dunida ugu halista badnaa ayaa Dukaankeeyga iigu soo galay ka dibna Indha adeegiisa (Daawo Yaabkaan)